बाक्लोवा बाकू: एक सानो इतिहास र खाना पकाउने सानो रहस्य
के तपाईंलाई थाहा छ के बेल्लवा? यो एक अखरोट परत, राजा र सुल्तानहरूको मनपर्ने डिशको साथ एक प्रसिद्ध अभिमुखी व्यभिचार हो। यो ब्याचमा धेरै स्वादहरू र नामहरू छन्: अर्मेनियाई, हनी, चक्की, टर्की, बेकलावा बाकू, आदि। मसालेदार अखरोट केक धेरैजसो नाम र स्वाद छ, तर तिनीहरू सबैसँग बहुभाषी छन्। यो बाँकीको पाकबाट मुख्य फरक छ।
पूर्वी मिठाई तुर्क साम्राज्य को पर्ल हो । उहाँ संसारका विभिन्न देशहरूमा मायालु र प्रशिक्षित हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि, सन् 2008 मा, अजरबैजानमा एक नवको छुट्टीमा कन्फेक्शनरहरू द्वारा एक विशाल बाक्लोवा बाकू पकाइएको थियो। पकाउने पक्कै सामानहरू पकाउनुको लागि लगभग हप्तासम्म काम गर्न थालेको थियो, 350 किलोग्राम काँटा र पाउडर गरिएको शिर, सात हजार कुखुरा अण्डा, र लगभग 25 किलो किलोग्राम र हजेलनेट्स यो खर्च गरियो। मीठा नाजुक बाह्र मीटर लामो र तीन मिटर चौडा पारियो, यो 15,000 भन्दा धेरै व्यक्तिले प्रयास गर्यो। यो सबैभन्दा ठूलो बेकरी हो जुन सीआईएस देश र रूसको रेकर्ड पुस्तकमा रेकर्ड भएको थियो।
बेल्लवाको लागि पतली आटाको लागि पहिलो पाक नुस्खा अश्शूरीबाट आएको थियो। यो नुस्खाले तुरुन्तै ऐतिहासिक उल्लेख पाएको छ - हरेक व्यञ्जनले जस्तै "घमन्ड गर्न सक्दैन"। फतिहको समयको पुरानो पाक पुस्तकमा (अब यो ओटमन सुल्तानहरूको संग्रहालयमा छ) त्यहाँ एउटा प्रविष्टि हो जुन पहिलो बेल्लवा 1453 मा बनाइएको थियो जसलाई सुल्तान को अदालत शेफले बनाइएको थियो। यो मीठे मिठाई उनको लागि धेरै आकर्षक थियो कि उनले हरेक छुट्टी को लागि यो डिश पकाना पकाने को आदेश दिए।
तर यो यसको उत्पत्तिको एक संस्करण हो। अन्य स्रोतहरूका अनुसार, बेक्लावा बाकू टर्कीको निवासी हो, यो 8 औं शताब्दी ईसामा त्यहाँ सुरु भएको थियो। पहिले, यो "baklava" भनिन्छ, यो एक मोटे आटाबाट पकाइएको थियो, तर यो नुहाउँदो रहेछ जब सम्म युरोपमा लोकप्रिय हुन्थ्यो। ग्रीक शेफले आटा धेरै नाजुक र कुखुरा बनाउन थाले, यसैले पूर्वी मिठास एक सानो स्वाद र आकस्मिक उपस्थिति दिँदै।
आज हरेक पूर्वी महिलाले यो नुस्खाको लागि आफ्नै अनूठे नुस्खा छ। बेल्लवा स्वादिष्ट बनाउन, यसको तयारीको लागि आटा धेरै पतले रोकिन्छ। यसको लागि, तालाबारीको काठबाट बनेको विशेष रोल प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूको लम्बाई तीन मीटर पुग्छ। पूर्वमा, स्थानीय बेकर्सहरू व्यभिचारको तयारीमा एक ठूलो चक्रमा प्रक्रिया तयार पार्छन् - यो धेरै रोचक छ कि कसरी महान् रूपमा तिनीहरूले विशाल रोलिंग पिनहरूसँग प्रबन्ध गरेका हुन्छन्।
यसैले, आटा पानाहरू धेरै पटक रोलिएको छ जुन यो शाब्दिक पारदर्शी बनाउन। भरने को लागि बादाम, अखरोट, पिस्ता ले लिया छ, उनि grinded या पतली कटा भयो, र फेरि मधु सस मा उबला भयो, मसालेदार मसलाहरु लाई जोड दिए। जब भरने ठुलो हुन्छ, यो आटा परतों को बीच साफ-सफाई रखी जान्छ, जो मक्खन वाला पूर्व स्नेहन वाला हुन्छन्।
प्रत्येक देशमा एक व्यञ्जन एक व्यक्तिगत नुस्खाको अनुसार तैयार गरिएको छ, यस उद्देश्यका लागि विभिन्न प्रकारका भित्ताहरू, सिजनहरू, मसलाहरू र आटा प्रयोग गरिन्छ। सामग्रीको पाक र अनुपातको विभिन्न तरिकाहरूको बावजुद, नुस्खाको आफ्नै अयोग्य अनि अनिवार्य नियमहरू छन् जुन पालन गर्न सकिन्छ।
गृह खाना पकाउने प्रस्तावलाई कम रूपको धातु प्यानमा बेल्लवाको बेकिंग गर्न सिफारिस गर्दछ, जुन घनीले भरिएको हुन्छ। बन्द केक जस्तै उपचारको रूप। मक्खन थप्न दुई बिचहरूमा उठाउनुहोस्। बेल्लवा बेक्ड पछि, यो सिरप संग पतली मसालेदार स्वाद दिन को लागी गरिन्छ र सीधा कटौती मा एक पैन मा। नट भरने को लागि एक विशेष स्वाद दिइएको छ, जो धेरै तरिका मा तैयार छ।
पहिलो सरल छ
अखरोट पहिले देखि नै छीलिएको छ, उबलते पानी पछाडि पछि, त्यसपछि तेल ठूलो बनाउन धेरै उथाइ। अन्त्यमा, यो बिरुवा पाउडर, हृदयघाती र दालचीनी (मसालेको अनुपात गठनमा निर्भर गर्दछ)। नतीजा एक मार्बीन जन हो।
दोस्रो प्रकार जटिल छ
नट-र-चिनियाँ भरिएको कुचल कुकीहरू परिचय गर्दछ। एक कच्चा अण्डा लगाइन्छ, प्रोटीन यसको बाट अलग हुन्छ, चिनियाँसँग भिडिएको छ, त्यस्ता कार्यहरू जिरोका साथ गरिन्छ। तैयार निर्मित व्हीप्ड मास भरने को लागी admixed छ।
यो नुस्खा एकदम सरल छ, यो निस्सन्देह शास्त्रीय भन्दा टाढा छ, तर अझै पनि व्यञ्जनको स्वाद धेरै सुखद हुन सक्छ, यसले हरेक गृहिणीलाई पकाउन सक्छ।
200 gr। तीन चश्मा सिफटेड आटाको साथ मसाला क्रीम मक्खन, एक गिलास खट्टा क्रीम जोड्नुहोस्, आटा घुँडा र चिसोमा एक घण्टाको लागि छोड्नुहोस्। आटा ठुलो हुँदा, भरपूर तयार पार्नुहोस्: 100 gr। चिनो, अण्डा, काटा अखरोट (200 ग्राम), हृदयमण्डल (3 बक्से) - सबै मिश्रित एक साथ।
हामी ठुलो आटा बाहिर निकाल्दछौं, यसलाई दुई बराबरको भागमा विभाजित गर्नुहोस् र धेरै पतले यसलाई रोल गर्दछ। पहिलो तह मोल्ड मा राखिएको छ, यसको भराई संग चिकन र एक दोस्रो पानाको साथ कवर। गठन गरिएको केक केकहरू ताम्बूहरूमा काटिएको छ, हामी यसलाई तल्लो साढे मिनेट (180 डिग्री सेल्सियस) को लागि ओवनमा पठाउँछौं। यस समयमा, बेल्लवा बाहिर निस्कन्छ र माछा चटनीको साथ राखिएको छ: उबले पानीको चिसो पानी (50 ग्राम) र मोटी सम्म पकाउनुहोस्।
माट कटरहरू। खाना पकाउने विधि
रास्पबेरीबाट जाम - सरल, स्वादिष्ट र अविश्वसनीय उपयोगी
फिल्म "आमा": समीक्षा, प्लट, डाली
"Arava": प्रयोगको लागि निर्देशन।
ह्यु: आकर्षण, जलवायु, फोटो र समीक्षा
रेस्टुरेन्ट, नोवोसिबिर्स्क, वर्णन र समीक्षा "माफ गर्नुहोस् छैन adzhika"
वजन लागि Diuretic जडीबुटी। ग्रीन पार्टी हुनुहोस्।
पात हुक: बुनाई योजना
भौंक खोकी - कारणहरू, लक्षण र उपचार
म calves मा खुट्टा ऐंठन किन भइरहेको छु?
कती हुन सक्छ? आयामहरू र डिजाइन
जीवित कोठा मा भान्सा हस्तान्तरण: अवैध र वैध समाधान। समतल नया स्वरूप